Ziyini izimiso nokulindelwe i-Airbnb? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ziyini izimiso nokulindelwe i-Airbnb?
Ukusiza ukugcina umphakathi wethu uphephile futhi wethenjwa, siye sashicilela izimiso zethu nesikulindele kubo bonke ababungazi kanye nezivakashi.
Senze lezi zimiso sizisekela olwazini lwethu oluningi lokusebenzisana nomphakathi we-Airbnb. Lezi zimiso zihloselwe ukuqoqela ndawonye izinqubomgomo zethu zibe into eyodwa ezosiza amalungu omphakathi we-Airbnb aqonde kangcono ukuthi yini abangayilindela kithi nokuthi yini esiyilindele kubo.
Zizosebenza kanjani lezi zimiso?
Isinqumo ngasinye esithathwayo siwumphumela womsebenzi oningiliziwe nowenziwe ngokucophelela ithimba longqondongqondo abaqinisekisa ukuthi senza izinqumo ezifanele. Ukusabela kwethu ekuphulweni kwalezi zinqubomgomo bekulokhu futhi kusazoqhubeka kusekelwe ekutheni udaba lubucayi kangakanani. Sizolwela ukubhekana nezimo zesimo ngasinye lapho sifinyelela isinqumo esiwujuqu, kodwa sinokuqonda okulinganiselwe ekusabeleni kwethu ekwephulweni okukhulu kwezinqubomgomo.
Ngingenzani uma ngingavumelani nesinqumo?
Amathimba ethu ashaya imithetho akhiwa ngochwepheshe abazinikezele, kodwa nabo basengabantu. Ngakho, ezimweni ezingavamile, izinqumo eziphoqelelayo zingaba namaphutha. Uma ungavumelani nesinqumo esisithathile, ungaxhumana nathi futhi sizobuyekeza isinqumo sethu. Okushiwo izimiso nokulindelekile ngeke kubuyekezwe.
Ingabe izimiso zizoshintsha ngokuhamba kwesikhathi?
Siqhubeka sifunda futhi sikhula ngakho izimiso nokulindelekile kuzoshintsha ngokuhamba kwesikhathi. Qiniseka ukuthi ubuyekeza izimiso uma unanoma imiphi imibuzo mayelana nesimo esithile.
Yiziphi izidingo eziyisisekelo ze-Airbnb kubabungazi?
Isiqinisekiso Sombungazi we-Airbnb sinikeza ukuvikelwa kuze kufike kwi-$1,000,000 kumbungazi kongenzeka kwimpahla kwisehlakalo esingajwayele…